Wikipedia နဲ့ CIA က မြင်တဲ့နော်ဝေစီးပွါးရေး Economy – X | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Wikipedia နဲ့ CIA က မြင်တဲ့နော်ဝေစီးပွါးရေး Economy – X
Wikipedia နဲ့ CIA က မြင်တဲ့နော်ဝေစီးပွါးရေး Economy – X
Posted by Kyaemon on Jul 18, 2012 in Business & Economics, Education |2comments
CIA FACT BOOK Norway Economy Wikipedia
စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ် က စတင်ပြီး တိုးတက်မှုမြန်ဆန်လာတာ၊
အခြားဥရောပနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရင် နော်ဝေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဟာ အလွန်ကြီးမြင့်တာ၊
ခိုင်လုံ ဘက်စုံ ကျနတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးစံနစ်လဲရှိတာ၊
The economy of Norway isadeveloped mixed economy with heavy state-ownership in strategic areas of the economy. Although sensitive to global business cycles, the economy of Norway has shown robust growth since the start of the industrial era. Shipping has long beenasupport of Norway’s export sector, but much of Norway’s economic growth has been fueled by an abundance of natural resources, including petroleum exploration and production, hydroelectric power, and fisheries. Agriculture and traditional heavy manufacturing have suffered relative decline compared to services and oil-related industries, and the public sector is among the largest in the world asapercentage of the overall gross domestic product. The country hasavery high standard of living compared with other European countries, andastrongly integrated welfare system.
Economy of Norway – Wikipedia, the free encyclopedia
လယ်ယာကိုင်းကျွန်း သစ်တော နဲ့ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း တို့ကိုဘဲ အခြေခံရတာ၊
သို့သော် အစာရေစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတာက နဲ တာပါ၊
၁၉ ရာစုကျတော့(လူဦးရေများလာလို့) လယ်ယာမြေတွေ မလောက်မင ဖြစ်တာ၊
မြောက်အမေရိကာ (ကနေဒါ နဲ့ ယူအက်စ်) သို့ ပြောင်းရွှေ့ဘို့
Prior to the industrial revolution, Norway’s economy was largely based on agriculture, timber, and fishing. Norwegians typically lived under conditions of considerable scarcity, though famine was rare. Except for certain fertile areas in Hedemarken and Østfold, crops were limited to hardy grains, such as oats, rye, and barley; and livestock to sheep, goats, cattle, pigs, and some poultry; in places this was complemented with hunting. In areas of Central and Northern Norway, the Sami subsisted on the nomadic herding of reindeer. Fishing all around the coast was dangerous work, though fish such as herring, cod, halibut, and other cold-water species were found in abundance. The introduction of the potato to Norway (in the 18th century) provided considerable relief for Norwegians.
The state has large ownership positions in key industrial sectors, such as the strategic petroleum sector (Statoil), hydroelectric energy production (Statkraft), aluminum production (Norsk Hydro), the largest Norwegian bank (DNB) and telecommunication provider (Telenor). The government controls 31.6% of publicly-listed companies. When non-listed companies are included the state has even higher share in ownership (mainly from direct oil license ownership)…
၁၉၆၆ ကစတင်ပြီး ရေနံရှာတာက ၁၉၆၉ ကျမှတွေ့သွားတာ၊
Ocean Viking (ရေနံရှာသင်းဘော) က ၁၉၆၉ ဩဂုတ် ၂၁ မှာ ရေနံရှာတွေ့တာ၊
ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့တွင်း (ကွင်းပြင်)တွေက တော်တော် ကြီးတာ၊
၁၉၈ဝ မှာ ပဌမရေနံတွင်းဖြစ်တဲ့ Ekofisk ရေနံတွင်း က ၄၂၇၄၄၂ ပီပါး(စည်ပိုင်း)လုံးရေ ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တာ၊
ဒါနဲ့ဘဲ ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့တွင်းတွေတဖြေးဖြေးကုန်ခန်းလာတာကနေ နောက်ပိုင်းကျမှ ရေနံတွင်းသစ်တွေကို ထပ်တွေ့လာတော့တာ၊
The North Sea turned out to present many technological challenges for production and exploration, and Norwegian companies invested in building capabilities to meet these challenges. A number of engineering and construction companies emerged from the remnants of the largely lost shipbuilding industry, creating centers of competence in Stavanger and the western suburbs of Oslo. Stavanger also became the land-based staging area for the offshore drilling industry. Presently North Sea is past its peak oil production. New oil and gas fields have been found and developed in the large Norwegian areas of the Norwegian Sea and the Barents Sea, including Snøhvit….
အမေရိကားနေ နော်ဝေနွယ်ဘွား အမေရိကန် ၄.၆သန်း တို့ဟာ
ပင်ရင်းနော်ဝေနိုင်ငံနေနော်ဝေပြည်သူဦးရေ ၅.ဝ သန်း နဲ့မတိမ်းမငြိမ်းလောက်တောင်ရှိတာ၊
နံမယ်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချော Marilyn Monroe မယ် ရီလင်း မွန်ယိုးဟာ နော်ဝေအနွယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ကြေးပေးကြတာ၊
John Ashcroft ကMissouri ပြည်နယ် Governor (ဘုရင်ခံအဆင့်လိုဘဲ)၊ Missouri က ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်၊ယူအက်စ်အေ တရားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာ၊
၂၀၀ရ မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၃ရ Twh ထုတ်လုပ်တာ၊ ဒီအနက် ၁၃၅ Twh က ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများမှ ဖြစ်တာ၊
၁၅၃၆ Gwh က သဘာဝ ရေပူစမ်းသုံး လျှပ်စစ်ထုတ်စက်ရုံစခန်းမှဖြစ်ပြီး၊
၈၉၂ Gwh က လေထုအင်အားသုံးလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများမှဖြစ်တာ၊
နော်ဝေသုံးတာက ၁၁၅ Twh ဖြစ်တာ၊
၂၀၀၄-၂၀၀၉ အတွင်းမှာ နော်ဝေပြည်သူတဦးချင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးတာက နှစ်စဉ် ဖျမ်မျှအားဖြင့် ၂၆-၂ရ Mwh ရှိတာ၊
၂၀၀၈ မှာ ဥရောပ EU ရဲ့တဦးချင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးတာက ဖျမ်းမျှအားဖြင့် ၇.၄ Mwh ဖြစ်လို့ ၃ ဆကျော်တောင်ရှိတာ၊
Of the total production in 2007 of 137 TWh, 135 TWh was from hydroelectric plants, 1 536 GWh was from thermal power, and 892 GWh was wind generated. In same year, the total consumption was 115 TWh.
The annual electricity consumption was about 26-27 MWh per inhabitant during 2004-2009 when the European union (EU15) average in 2008 was 7.4 MWh. Norway’s consumption of electricity was over three times higher per person compared to the EU 15 average in 2008. The domestic electricity supply promotes use of electricity. …
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံSweden, Denmark, Germany, Netherlands (Holland) တို့နဲ့တိုက်ရိုက် ဓာတ်ကြိုးလိုင်းတွေ ချိတ်ဆက် သွယ်သန်း ထားတာ၊
ဝယ်အား နဲ့ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်ပြီးပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိတာ၊
Norway has an open electric market, integrated with the other Nordic countries. Export and import is routine over the direct power links to Sweden, Denmark, Germany and the Netherlands. The market is handled by NASDAQ OMX Commodities Europe and Nord Pool Spot. Many of the hydroelectric plants in Norway are easily adjustable and can adapt well to variations in demand, and hence in price. Onanormal day, when price is low during nighttime, Norway normally imports power, and exports during daytime when the price is higher.
၂၀၀၈ မှာ နော်ဝေက ထုတ်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 141 Twh အနက် 98.5% က ရေအားမှဖြစ်ပြီး၊
နိုင်ငံတကာ ထုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စုစုပေါင်း ရဲ့ 4.3% ဖြစ်တာ၊
IEA အရ၊ China, Canada, Brazil, US, Russia နိုင်ငံတို့ပြီးရင် အမှတ်စဉ် ၆ က နေရာယူတာ
See also: Hydroelectricity in Norway
Norway is considered by many[who?] to have particular expertise in the area of building and operation of hydroelectric power plants.
Hydroelectricity was 98.5 % of electricity generation in 2008. 141 TWh hydropower in 2008 was 4.3 % of the world total. The installed capacity of hydropower was 29 GW in 2007.
According to IEA Norway was the 6th in the hydroelectricity power in the world in 2008 after China, Canada, Brazil, United States and Russia.
မြန်မာနိုင်ငံထက် အစစအရာရာ အများကြီး ဖွံ ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံထက် အများကြီး ပိုပြီးနေချင်စရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံလို ့ပဲ သိပါတယ်ဗျား
မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်မှု ဒေသခံတွေ ထိခိုက်
ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာ တည်ဆောက်မယ့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်မီ တိုးတက်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ထက် ဧရာဝတီမြစ်ကို အမှီပြုနေတဲ့ ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုတွေ အပြင် ဒေသခံတွေရဲ့ လူမှုရေးကိစ္စ အဝဝကို ထိခိုက်စေမယ့်ကိန်း ပိုပြီး များနေတယ်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြောင့် နိုင်ငံအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေဟာ လုပ်ကြံ ပြောဆိုချက်တွေပဲ ဖြစ်တယ်၊ ဒီစီမံကိန်းဟာ နိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်စရာ မရှိတဲ့ စီမံကိန်း ဖြစ်တယ်လို့ အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာ တုံ့ပြန် ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှုကဏ္ဍကနေ စက်မှုကဏ္ဍကို အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက် ဖြစ်တာမို့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ၊ မေခ မေလိခ၊ မြစ်ညာမြစ်ဝှမ်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၈ ခုနဲ့ ပြည်သူလူထုအကျိုး လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်သလို ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေထက် ကောင်းကျိုးတွေကို ပိုပြီး ရစေတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့ထုတ် အစိုးရအာဘော် သတင်းဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ရာမှာ ပြည်သူလူထု ပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုး မတွေ့ရဘဲ မြစ်ကြောင်းတလျှောက်က ဒေသခံတွေအတွက် နစ်နာမှုတွေ အများကြီး တွေ့နေရတယ်လို့ Burma River Network မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ကြောင်းများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ ပါဝင်တဲ့ ကွန်ရက်အဖွဲ့က မအားနန်က ပြောပါတယ်။
“ဒီစီမံကိန်းတွေမှာ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မရှိဘူး။ မြစ်ဆုံနေရာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နေသလို အခုအချိန် မြစ်ဆုံမှာ ရေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေတယ်။ ဒီ မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆောက်မယ်ဆိုတော့ ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့ နေရာတွေကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးတဲ့ အောင်မြေသာ စံပြကျေးရွာလို့ ပြောတယ်။ တကယ်တမ်း ကျမတို့ တွေ့နေရတာကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ အတူတူပဲ။ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သူတို့ သေသေချာချာ ရေရေရာရာ မသိဘူး။ နောက်တချက်အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဘယ်လောက်လိုမှု အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီးတော့ ဒီရေကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါက မြစ်အောက်ဘက်မှာလည်း စိုးရိမ်စရာ အများကြီးရှိတယ်။”
အခုလို လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးသာ မကဘဲ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိခိုက်စေတာမို့ ဒီ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေအတွက် EIA ခေါ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်မယ့် တိုင်းတာတွက်ချက်ပြီး ဥပဒေစည်းကမ်း စနစ်တကျ ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် ဦးအုန်းက ပြောပါတယ်။
“Dam တခုဆောက်ရင် Dam အထက်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမယ်။ ရေလွှမ်းမိုးရင် ရွာတွေ၊ မြို့တွေ ရေမြုပ်မယ်။ တောတွေလည်း ကုန်မယ်။ အကယ်၍ လူတွေလည်း ရွှေ့ပြောင်းရမယ်။ Dam ရဲ့ အောက်ကျတော့ ရေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတာ ရှိမယ်။ အခန့်မသင့်လို့ Dam ကြီး ပြိုကျသွားရင် အောက်ကလူတွေလည်း ရေဘေးဒုက္ခရောက်မယ်။ ရေ Quality ကိုလည်း အများကြီးကို ထိခိုက်သွားမယ်။
“ငါးတွေဘာတွေလည်း ဥလို့ရှိရင် အညာတက်ဥတာ။ Dam ကြီးဆောက်တော့ ငါးတွေဘာတွေ မျိုးတုံးကုန်မယ်။ အကုန်လုံး ပင်လယ်ထဲထိအောင် မြစ်ညာရော၊ မြစ်ကျေရော အကုန်ဒုက္ခရောက်ပြီ။ EIA လုပ်တဲ့ သဘောတရားက အဲဒါတွေပဲ။ သဘာဝဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Dam တွေ ဆောက်လို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ Standard တွေ၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒါတွေက ဥပဒေ ထုတ်ပြီးသား။”
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေကို ဆက်ပြီး မလုပ်သင့်ဘူးလို့ EIA လေ့လာမှုတွေကနေ ပြောထားကြောင်း သိရတယ်လို့ မအားနန်က ပြောပါတယ်။
“အရင်ကလုပ်ထားတဲ့ စာမျက်နှာ ၉၀ဝ ကျော်ရှိတဲ့ EIA Report ကျမတို့တွေ့တယ်။ အဲဒီ EIA Report မှာ တရုတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ မြန်မာက လေ့လာသုံးသပ်မှု လုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဒီ မြစ်ဆုံ ရေကာတာကို မဆောက်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုဆိုးကျိုးတွေကို ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် ဧရာဝတီ ရေကာတာကြီးကို မဆောက်ဖို့ ဆိုပြီး သူတို့က အတိအလင်း ပြောထားတဲ့ဟာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကိုလည်း သူတို့ ဘယ်တော့မှ ထုတ်ဖော် ပြောတာ မရှိဘူး။ ဒီလို ဖြန့်ဝေတာတွေ မရှိဘူး။”
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရာမှာ ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ဘက်ပေါင်းစုံ လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ တိုးတက်မှုမျိုး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုတာပါ။
“ကျောက်မီးသွေးသုံးတာ အဆိုးဆုံးပဲ။ ကျောက်မီးသွေးထက် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီက သက်သာတယ်။ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီထက် ဂက်စ်က သက်သာတယ်။ ဂက်စ်ထက် ရေအားလျှပ်စစ်က သက်သာတယ်။ ဒါမှန်တယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒါလုပ်တဲ့အတွက် လူတွေရော၊ သဘာဝဝန်းကျင်ရော ပျက်စီးတာတွေလည်း ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ အဲဒါတွေ မစဉ်းစားဘဲလုပ်တာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ တိုးတက်မှု ခေါ်တယ်။”
မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထက် အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ပိုပြီး အကျိုးရှိစေမှာမို့ မြန်မာ့နောင်ရေးအတွက် ရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
“မြစ်ဆုံက ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယူနန်က လျှပ်စစ်လိုင်းကနေ တဆင့် တရုတ်ပြည်ကို တင်ပို့မယ်လို့ CPI ကုမ္ပဏီက သတင်းတခုမှာ ရေးထားတယ်။ တကယ်တမ်း ရေကာတာဆောက်မယ့် အချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေ ဒီဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေဆီ ရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေသခံ လူထုတွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်း မရဘူး။ ဒီကနေ အကျိုးအမြတ် ဘာမှလည်း မရဘူး။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်း အများကြီးဖြစ်တယ်။ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှု မရှိတဲ့၊ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တခုလုံး အနာဂတ်တွေမှာ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမယ့် ဒီလို ကြီးမားတဲ့ ရေကာတာကြီးကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တရုတ်အစိုးရတွေကို တောင်းဆိုချင်တယ်။”
မြစ်ဆုံ ရေအားစီမံကိန်းကို ဆက်ပြီး မလုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာအစိုးရကိုသာမက တရုတ်အစိုးရကိုပါ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံက တောင်းဆိုမှုတွေ အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်နေတာပါ။